Ciidamada ammaanka Puntland oo nin sixiroole ah ku qabtay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandCiidamada ammaanka Puntland oo nin sixiroole ah ku qabtay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso
May 8, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Ninka sixiroolaha ah ee ay qabteen ciidamada ammaanka Puntland. [Xigashada Sawirka: Horseed Media]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Ciidamada ammaanka Puntland ayaa nin sixiroole ah ku qabtay gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari.
Isaga oo warbaahinta la hadlayay, taliyaha booliiska Boosaaso Gaashaanle Sare Yuusuf Axmed ayaa sheegay in sixirooluhu uu joogay magaalada in ka badan 25-sanno.
Sixiroolaha ayaa soo bandhigay alaabo kala duwan oo u isticmaalayay sixirka waxaana kamid ah: lafo xayawaan, qodobo dhowr ah, caws, baal shimbireed, salool iyo in kale oo badan.
Waxaa laga baqayaa in uu sixray dad badan oo ku xanuunsan gudaha magaalada, sida uu sheegay taliyaha ciidanku.
October 18, 2016 Janaraal Moorgan oo u dhow in uu kamid noqdo xubnaha aqalka sare
Madaxweynaha Puntland oo xilka ka qaaday agaasimihii wasaaradda maaliyada ee muddada dheer joogay xafiiska
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xilka ka qaaday agaasimaha wasaaradda maaliyada Cabdirisaaq Maxamed Xasan kaasoo muddo dheer joogay xafiiska. Faysal Cabdullaahi Warsame ayaa loo magacaabay agaasimaha cusub ee wasaaradda maaliyada Puntland, sida [...]